के विशेषता तपाईं भौतिक लिनु आवश्यक? एक विशेषता "भौतिकशास्त्र" मा कसलाई काम गर्ने?
भौतिक - सबैतिर लागू जो एक विशाल विज्ञान, छ। साँच्चै, आफ्नो नियम धन्यवाद ब्रह्माण्डको अवस्थित, सूर्य र ग्रह वर्तमान सबै जीवनको लागि आवश्यक अवस्था Revolve। आधुनिक मानिस शारीरिक प्रक्रियाहरू बिना जीवन छैन। यो विज्ञान थप पुरातन विद्वान विकास गर्नुभएन भने, त्यसपछि आज धेरै प्रमुख आविष्कारहरू र आविष्कार हुन थियो। एक व्यक्ति सिक्ने रुचि रूपमा विशेषता भौतिक र एकदम विविध छन्।
जो संस्थाले जाने?
पहिले तपाईं एक विशेषता निर्णय गर्न आवश्यक छ। के म जान्न चाहनुहुन्छ? जो पेशामा सबै आफ्नो जीवन समर्पित गर्न इच्छा छ? विकल्प विशाल छ। ठाउँ, परिवहन, प्रकृति, घरेलू वस्तुहरू, निर्माण, चिकित्सा: तपाईं त बोल्न, को क्षेत्रमा एक अंतर विशेषज्ञता, छैन केवल विशेषता भएको मास्को ईन्जिनियरिङ् भौतिकशास्त्र संस्थान, मास्को राज्य विश्वविद्यालय वा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले मा "भौतिकशास्त्र" को लागि, तर पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले के विशेषता पास भौतिक? कम्तिमा एउटा सानो हदसम्म गर्न प्रविधी संग सम्बन्धित सबैलाई। उदाहरणका लागि, बच्चा एक astronomer हुन चाहन्छ। उहाँले रूसी भाषा (सामान्यतया, यो निबंध), गणित र भौतिक हुनेछ। जानिन्छ, विद्यालय परीक्षा पास हाल, त्यसैले एक सानो विषय रूपमा भौतिक चयन गर्न। रूसी गणित र यति सबै अनिवार्य पास।
विकल्प संग गलत हुँदैन
विद्यार्थीलाई आफ्नो टाउको तोड्न शङ्का संग आफूलाई tormenting छ छैन, यो विश्वविद्यालय मा खुला दिन सदृश राम्रो छ। मात्र होइन विशेषता को चासो बारेमा जानकारी पढ्न, तर पनि यदि सम्भव भएसम्म, विशेषज्ञहरु संग कुराकानी गर्न। अक्सर एक को कि बच्चा वा जवान व्यक्ति सपना बाहिर जान्छ, र अरू सबै कुरा कल्पना किनभने, पूर्ण फरक हुन्छ। राम्रो भर्खरै excruciatingly त्यसपछि थिएन, सत्य आफ्नो आँखा खोल्न। एक रोचक विशेषता मा सल्लाह पुस्तकको राम्रो स्रोत हुन सक्छ। उच्च विद्यालय र कलेज मा भौतिक उच्च विद्यालय कार्यक्रम बाट धेरै फरक छ। निस्सन्देह, यो केही सत्र सहन र एक विशेष विषयमा भूल गर्न सम्भव छ, र यो छ भने सम्पूर्ण पेशा र भविष्य पेशा खण्डमा? विकल्प द्वारा ध्यान नजिक हुनुपर्छ।
त्यहाँ बाल्यकाल देखि, एक भविष्य छुट्टी घर डिजाइन मोटर मा एक प्रारम्भिक उमेर देखि बुझ्न मोडेल संकलन गर्न चिप मिलाप गर्न प्रेम केही मान्छे छन्। तिनीहरूले स्पष्ट क्रमशः जाँदै लायक थिए: पहिलो - Microelectronics संकाय, अर्धचालक उपकरणहरू साधन बनाउने संस्थाहरू मा; दोस्रो - वास्तु वा निर्माण संकाय लागि; तेस्रो - सडक / रेल द्वारा।
असामान्य र रोचक पेशा
चिकित्सा उपकरणहरू र उपकरण, भौतिक प्रयोगशाला: धेरै संरक्षित, तर धेरै लोकप्रिय, सीधा भौतिक प्रयोग गरिन्छ जो छन्। को मास्को राज्य विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय पर्याप्त गहिराई को भौतिक सम्बन्धित छन् विशेष चासो विभिन्न क्षेत्रमा सिकाउनुहोस्। स्नातक सैद्धान्तिक physicists हुन सक्छ। "भौतिक" MiFi मा पनि एक विशेषता छ। यस्तो व्यक्ति काम कसको? विद्यार्थीलाई राम्रो तरिकाले स्थापित गरिरहेको छ भने यो सिकेको गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय प्रतिभा को त्यो अभ्यास लागि उपयुक्त प्रयोगशाला पठाउन हुनेछ।
एक कलेज वा विश्वविद्यालयमा, लेख लेख्न किनभने पुस्तकहरू प्रकाशित भौतिक समानान्तर, स्कूलमा विषयमा सिकाउन सक्छ। यो भौतिक के संलग्न सकिन्छ को न्यूनतम सूची हो। उहाँले मात्र सिद्धान्त तिखार्ने हुँदैन, तर पनि आफ्नो विचार महसुस गर्न, व्यवहार मा सबै लागू गर्न। यो भौतिक त्यसपछि बुद्धि र erudition छ, तार्किक विचार गर्नुपर्छ।
यो महत्त्वपूर्ण गणित छ?
गणित बिना यो शारीरिक समस्या समाधान गर्न असम्भव छ। उदाहरणका लागि, गति को समीकरण लेख्न एक सूत्र, तपाईं सम्भावना, integrals, डेरिवेटिव र जस्तै गणना गर्न अभिव्यक्ति रूपान्तरण गर्न उपलब्ध विकल्प सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ जसमा मार्फत हराएको डाटा हालको गणना। शारीरिक पेशा मा यस्तो आधारभूत ज्ञान बिना, तपाईं पनि त्यसो गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, एक भौतिक बस पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण को संरचना बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तर्क "यो भने हुन भनेर ..." तर यी पेशों अवस्थित छैन जो गणित र भौतिक मात्र पारित छैन। यी दुई विषयों हातमा हात जानुहोस्। सबै संरक्षित मा प्रशिक्षण प्राप्त गर्दा साहित्य संग पनि रूसी भाषा सबैतिर आवश्यक। गणित संग भौतिक लगभग जताततै प्रवेश परीक्षा मा संग व्यवहार गर्नुभयो छन्।
इलेक्ट्रनिक्स आविष्कारक, रेडियो ईन्जिनियरिङ् र मशीनरी
पक्कै, सबै उपकरणहरू र मिसिन धेरै राम्रो भौतिक र गणित मान्छे पोख्त डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो, त्यस्ता मानिसहरूलाई सिद्धान्त सिक्न, अणु को संरचना, अणुहरु, स्वतन्त्र तत्व, पदार्थ र प्रयोग समान वा नजिक analogy फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस्। आधुनिक मानिस पुरानो मा एक जोर नयाँ प्रविधी सिर्जना गर्छ। जमीनमा त्यहाँ तिनीहरूले उत्पादन गर्ने साना छ। तपाईं कुनै पनि जटिल कुरा सिर्जना गर्नु अघि, यो त जाँच कम्तिमा कागज मा आकर्षित गर्न यसको सबै तत्व देखाउन, र आवश्यक छ। त्यहाँ वैज्ञानिक देखि, र यो छ जो पदार्थ देखि ट्रांजस्टर, आदि मिलाप गर्न आवश्यक यहाँ छ भनेर सिकेका
के विशेषता भौतिक रेडियो इलेक्ट्रनिक्स, साधन, मेशिन बिल्डर्स काम गर्न आवश्यक छ? नाम सूचीकृत ती समान छन् किनभने, कुनै अर्थमा सबै अवस्थित बनाउछ सूची, तर "उप" को एक प्रकारको हुनेछ। आवश्यक प्राविधिक विश्वविद्यालय चयन गर्नुहोस्। कसले कसरी नयाँ आविष्कार गर्न सिक्न चाहने कम्प्युटर, सेल फोन र ल्याप्टप, सङ्कलन गर्न इच्छुक छन्, त्यो दिशा माथि उल्लेख नै लागि डिजाइन इन्जिनियर बन्न सक्छ।
अन्य विज्ञान संग भौतिक संयोजन
जोडहरुको को रोगहरु, कम फिर्ता दुखाइ, मधुमेह र अन्य रोग व्यवहार जो दुई transducers, संग vibroacoustic उपकरण उदाहरणका लागि लिनुहोस्। निश्चित, तपाईं, जीव र भौतिक थाहा सही उपकरण उपचारको लागि सिर्जना गर्न आवश्यक छ। अक्सर, को चिकित्सक र भौतिक सँगै प्रयोगशाला मा, लेखकको विचार सिर्जना काम गर्नेछ। बायोफिजिक्स - यो पनि भौतिक वा जीव अध्ययन गर्न सिकेका गर्न सकिन्छ कि एक विज्ञान हो। यो सबै चासो र मान्छे को क्षमता मा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ चिकित्सा विश्वविद्यालय यस्तो विशेषता हो।
भौतिक पनि ध्वनिक र विद्युत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ: अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू infrasound, फरक विद्युत emitters। यो उपकरण पनि भौतिक नियमहरू को ज्ञान बिना सिर्जना microclimate सिर्जना गर्न भनेर सम्झँदा लायक छ।
अझै पनि, के विशेषता तपाईं भौतिक लिनु आवश्यक? प्राविधिक कलेजहरु, शैक्षिक प्रवेश लागि एक गाइड को रूप, मास्को ईन्जिनियरिङ् भौतिकशास्त्र संस्थान, मास्को राज्य विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय र अन्य रूसी र विदेशी विश्वविद्यालय तपाईं लिनु आवश्यक के वस्तुहरू बारेमा सबै जानकारी छ। एक विशाल, महत्वपूर्ण को विकल्प गल्ती र पछुताउनु छैन छैन।
कसरी बनाउने प्रमाणपत्र मा एक आवेदन सही छ
को 9th ग्रेड पछि प्रोग्रामर जहाँ सिक्न?
शुक्राणुजन के हो? अवधि निर्धारण
क्लीनर उत्पादन सुविधाहरु र कार्यालय: काम विवरण
लोकप्रिय टर्की पुरुष अभिनेताहरू। लोकप्रिय टर्की चलचित्रहरू र धारावाहिकहरूको अभिनेता
म एक चिसो संग स्नान गर्न जान सक्नुहुन्छ: चिकित्सा सल्लाह